आषाढ २०७७ २४	बुधबार, 8 Jul 2020 तृतिया, कृष्ण पक्ष
सुर्योदय: बिहान ०५:१०, सुर्यास्त: बेलुका ०७:०० चन्द्रास्त: बिहान ०७:५४, चन्द्रोदय: रात्रि ०९:३८
जयापार्वती व्रत समाप्त आज - आषाढ २४
संकष्टी चतुर्थी आज - आषाढ २४
जनसंख्या दिवस ३ दिन पछि - आषाढ २७
भानु सप्तमी ४ दिन पछि - आषाढ २८
रवि सप्तमी ४ दिन पछि - आषाढ २८
अष्टमी व्रत ४ दिन पछि - आषाढ २८
गोरखकाली पूजा ५ दिन पछि - आषाढ २९
भानु जयन्ती ५ दिन पछि - आषाढ २९
कामिका एकादशी ८ दिन पछि - श्रावन १
कण्डारक पूजा ८ दिन पछि - श्रावन १
कर्कट संक्रान्ती ८ दिन पछि - श्रावन १
दक्षिणयन संक्रान्ती ८ दिन पछि - श्रावन १
दक्षिणायन प्रारम्भ ८ दिन पछि - श्रावन १
लुतो फाल्ने दिन ८ दिन पछि - श्रावन १
गुरिया पर्व ८ दिन पछि - श्रावन १
कमैया मुक्ति दिवस ९ दिन पछि - श्रावन २
शनि प्रदोष व्रत १० दिन पछि - श्रावन ३
मण्डेला दिवस १० दिन पछि - श्रावन ३
घण्टाकर्ण ११ दिन पछि - श्रावन ४
मेष ( च, चू, चे, ला, ली, लू, ले, लो, अ, आ ) अनावश्यक रूपमा आफैलाई कोस्नाले जाँगर मार्दछ।	आज तपाईंले भूमि, अचल सम्पत्ति, वा सांस्कृतिक परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।	तपाईं आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई भनेको सबैमा सहमत हुनुहुँदैन - तर तपाईंले उनीहरूको अनुभवबाट सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ।	तपाईंका प्रेमीको अत्यधिक माँग गर्ने व्यवहारले आज रोमान्स कम नै हुने सम्भावना देखिन्छ।	आज काममा तपाईंको सफलताको दिन हुनेछ!	कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ।	आफ्ना जोडीको नराम्रो स्वास्थ्यले तपाईंको काममा रोकावट उत्पन्न हुन सक्छ, तर तपाईं कुनै पनि तरीकाले सबैको व्यवस्था गर्न सक्नु हुनेछ।
वृष ( ई, उ, ए, ऐ, ओ, व, वा, वो, वे, वौ, वं ) भौतिक लाभ र विशेष गरेर मानसिक सुदृढताको लागि मनन र योग सुरु गर्नुहोस्।	तपाईँको आशा अनुसार पैसाको लाभ हुनेछैन।	समग्र रूपमा लाभदायी दिन हो, तर तपाईंलाई भरोसा लाग्ने कसैले तपाईंलाई गिराउन खोज्नेछ।	एक अर्कालाई राम्ररी बुझ्नको लागि तपाईंले आफ्नो प्रेमी सँगै समय बिताउनु आवश्यक छ।	स-साना रूकावट भए तापनि - यो ठूलो उपलब्धिको दिन हो जस्तो देखिन्छ - सहयोगिहरुले उनीहरूले मन पराएको वस्तु नपाएमा खिन्न भएको विचार गर्नुहोस्।	आफ्ना जीवनसाथीसँग बिताएका दिनहरू सामान्य दिनभन्दा राम्रा जस्तो देखिन्छन्।
मिथुन ( क, का, की, कू, के, को, कौ, छ, ह, हा, छा ) सांझ चलचित्र-थिएटर वा आफ्नो जोडीसित खानाले तपाईंलाई तनाउमुक्त र सुन्दर मुडमा राख्नेछ।	तपाईंले परिवारका सदस्य र साथीहरूसँग पर्याप्त समय पाउनुहुनेछ।	प्रेमको खुशीयाली अनुभव गर्न सक्नु हुनेछ।	कुनै पनि साझेदारी गर्नु अघि आफ्नो भित्री भावनालाई ध्यान दिनुहोस्।	तपाईंको जोडीले आज तपाईंको लागि साँच्चै विशेष कुरा गर्नेछन्।
कर्कट ( हि, हू, हे, हो, डा, डी, डू, ड़, डे, डो ) आफ्नो झगडालु व्यवहारले तपाईंलाई शत्रुको सूचीमा थप्नेछ। तपाईंलाई कसैले यति धेरै क्रोधित नबनाओस जसले गर्दा तपाईंले पछि पछताउनु पर्ने हुन्छ।	आज तपाईंको समर्पण र मेहनतले पहिचान पाउनेछ र तपाईंको लागि केहि आर्थिक इनाम ल्याउनेछ।	तपाईंले आशा गरेझै काम गर्न असफल हुनाले बच्चाहरुले निराश गराउन सक्छन्। तपाईंले आफ्नो सपना पूरा भएको देख्नको लागि तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ।	तपाईंको प्रेमी जीवनले आज सुन्दर रूप लिनेछ। तपाईंले प्रेममा हुनुको स्वर्गीय भावना प्राप्त गर्नुहुनेछ।	तपाईंको जोडीको सामना गर्न कठिन हुनेछ।	आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्।	आफ्नो जोडीको निर्दोष कार्यले आज तपाईंको दिन शानदार बनाउनेछ!
शिंह ( म, मा, मी, मू, मे, मो, मौ, मं, ट, टा, टी़, टू, टो ) धेरै क्यालोरी भएको आहारबाट जोगिनुहोस् र आफ्नो व्यायाम तिर ध्यान दिनुहोस्।	आफ्ना व्यक्तिगत समस्याको समाधानको लागि कुनै मित्रले तपाईंको सल्लाह लिन सक्छ।	विवाहको प्रस्ताव हुनाले तपाईंको प्रेमी जीवन जीवनको लामो बन्धनमा परिणत हुन सक्छ।	आज तपाईं रोशनीमा हुनुहुनेछ - र सफलता तपाईंको सामर्थ्य भित्रै छ।	तपाईंको जोडी साँच्चै नै स्वर्गदूत हो भनेर तपाईंलाई थाहा छ। हामीलाई विश्वास गर्नुहुँदैन? आज विचार गरेर अनुभव गर्नुहोस्।
कन्या ( पा, प, पु, पं, प, पे, पो, पौ, टो ) अगाडि राम्रो समय आउँदैछ भनेर खुशी हुनुहोस् र तपाईंलाई अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हुनेछ।	दिनको पछिल्लो भागको अनपेक्षित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारको लागि आनन्द र खुशी ल्याउँछ।	आफ्नो बोलीको नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् किनकि तपाईंका कठोर शब्दले अशान्ति फैलाउँछ र आफ्नी प्रियतमासँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ।	नयाँ विचारहरू फलदायी हुनेछन्।	कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ।	आज, तपाईंका जोडीको स्वास्थ्यको कारणले केही तनाउयुक्त रहन सक्नु हुनेछ।
तुला ( र, रा, री, रु, रे, रो, रं, ता, त, तू, ते, तो, ती ) भौतिक लाभ र विशेष गरेर मानसिक सुदृढताको लागि मनन र योग सुरु गर्नुहोस्।	तपाईंको निवेश र भविष्यको लक्ष्यबारे गोप्य हुनुहोस्।	पुरानो सम्पर्क र सम्बन्ध पुनर्जीवित गर्ने राम्रो दिन।	कसैको नयाँ रोमान्सले तपाईंको आत्माको उत्थापन गर्दछ र तपाईंलाई खुसीको मुडमा राख्छ।	पेशावर कार्यमा जिम्मेवारी बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।	आज तपाईंले किनमेल गर्न जानुभयो भने आफैलाई राम्रो पहिरन सामाग्री छनोट गर्न सम्भावना छ।	आज, तपाईंले आफ्नो जोडीको मायाम जीवनका सबै कठिनाइहरू बिर्सिनु हुनेछ।
वृश्चिक ( न, ना, नी, नु, ने, नो, नै, नं, या, यी, यू, य ) आध्यात्मिक जीवनको लागि जरूरी भएको तपाईंको मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्नुहोस्। राम्रो नराम्रो सबै दिमागको माध्यमबाट आउने हुनाले मन जीवनको द्वार हो। यसले जीवनका समस्याको समाधान गर्नमा मद्दत गर्छ र चाहिएको प्रकाश प्रदान गर्दछ।	आवश्यक परेमा मित्रहरूले तपाईंको सहायता गर्नेछन्।	तपाईंका जोडीको स्वास्थ्य नराम्रो हुनाले आज प्रेममा बाधा पर्नेछ।	आज तपाईंमा आफ्नो उद्देश्य साधारण रूपमा तपाईंले गरेभन्दा उँचो बनाउने झुकाव छ - यदि परिणाम आफ्नो आशाको अनुरूप नभए तापनि निराश नहुनुहोस्।	आज आफ्नो जोडीले तपाईंसँग बसेको विषयलाई लिएर केही नराम्रो कुरा भन्न सक्छन्।
धनु ( ये, यो, ध, धा, धी, धू, धे, फ, भा, भी, भू, भे ) आनन्दले भरिएको राम्रो दिन।	मनोरञ्जन वा कस्मेटिक सुधारमा पनि धेरै खर्च नगर्नुहोस्।	आफन्तहरू तपाईंलाई सहयोग दिन तयार हुनेछन्।	तपाईंको लागि प्रेम हावामा छ। मात्रै वरिपरि हेर्नुहोस्, सबै कुरा गुलाबी छ।	नयाँ कामहरू पूरा गर्न महिला सहकर्मी उपयोगी हुनेछन्।	हालमा साँच्चै नै तपाईंको जीवन कठिन भएको छ, तर आज तपाईंले आफ्नो जोडीको प्रमोदवनमा आफैलाई पाउनुहुनेछ।
मकर ( भो, ज, जा, जी, जे, जो, जै, जं, ख, खी, खू, खो, ग, गा,गी ) राम्रो स्वास्थ्यको लागि लामो पैदल यात्राको लागि बाहिर जानुहोस्।	बढी खर्च र शंकास्पद वित्तीय योजनाहरु नगर्नुहोस्।	नयाँ निवेश गर्नु पर्दा स्वतन्त्र भएर आफ्नो निर्णय आफैं लिनुहोस्।	यस दिन तपाईं वरिपरि गुलाबको खुशबू हुनेछ। प्रेमका परमानन्दको आनन्द लिनुहोस्।	रिटेलर र थोक व्यापारीहरूको लागि राम्रो दिन।	तपाईं वरिपरि मानिसहरूले तपाईंको सम्बन्धमा मतभेद सिर्जना गर्न प्रयास गर्ने धेरै सम्भावना छ। बाहिरी मान्छको सल्लाह अनुसार केही नगर्नुहोस्।
कुंभ ( गु, गे, गो, स, सा, सी, सु, से, सं, सो, सौ, द, दा ) तपाईंलाई रोमाञ्चक र तनाउमुक्त राख्ने गतिविधिहरुसँग संलग्न हुनुहोस्।	तपाईंले वित्तीय लाभ हुने शानदार नयाँ विचार गर्नु हुनेछ।	तपाईं कामले साह्रै तनाउ दिएकोले परिवारका आवश्यकताहरू र खाँचाहरूलाई बिर्सिनु हुनेछ।	आफ्नो रोमान्टिक दृश्य प्रसारित हुन नदिनुहोस्।	तपाईंमा धेरै हासिल गर्ने क्षमता छ - त्यसैले तपाईंको बाटोमा आएका अवसर नछोड्नुहोस्।	आज तपाईंको बातचीतको पक्ष बलियो हुनेछ।	आज सहजताको कमीले गर्दा तपाईँ आफ्नो वैवाहिक जीवनमा निस्सासिएको महसुस गर्न सक्नु हुन्छ। तपाईंले राम्रो बातचीत गर्नु चाहिं आवश्यक छ।
मीन ( दि, दू, झं, थ, था, दे, दो, च, चा, ची ) तपाईं हालैमा निराशा महसुस गरिरहनुभएको छ भने - तपाईंले आज गरेका सही कार्यहरू र विचारहरूले धेरै आवश्यक राहत ल्याउनेछ भनेर बुझ्नुपर्छ।	छोराछोरीको अप्रत्याशित समाचारले मन खुसी गराउँछ।	आफ्नो प्रियसँग तपाईंको व्यक्तिगत भावना / रहस्य साझेदारी गर्ने यो सही समय होइन।	तपाईंको हावी मनोवृत्तिले आफ्ना सहकर्मीबाट आलोचना हुनेछ।	आफ्नो जोडीको अशिष्ट व्यवहारले आज तपाईंलाई केही कष्ट हुन सक्छ।
नाग पञ्चमी १० श्रावन, १७ दिन
खिर खाने दिन १५ श्रावन, २२ दिन
मित्रता दिवस १८ श्रावन, २५ दिन
रक्षा बन्धन १९ श्रावन, २६ दिन
जनै पूर्णिमा १९ श्रावन, २६ दिन
गाईजात्रा २० श्रावन, २७ दिन
श्री कृष्ण जन्माष्ठमी २७ श्रावन, १ महिना ४ दिन
बुवाको मुख हेर्ने दिन ३ भाद्र, १ महिना १२ दिन
कुशे औंसी ३ भाद्र, १ महिना १२ दिन
हरितालीका तीज ५ भाद्र, १ महिना १४ दिन
गणेश चतुर्थी ६ भाद्र, १ महिना १५ दिन
ऋषि पञ्चमी ७ भाद्र, १ महिना १६ दिन
ईन्द्रजात्रा १६ भाद्र, १ महिना २५ दिन
जितिया पर्व २५ भाद्र, २ महिना ४ दिन
संविधान दिवस ३ असोज, २ महिना १३ दिन
घटस्थापना १ कार्तिक, ३ महिना ११ दिन
बिजया दशमी १० कार्तिक, ३ महिना २० दिन
करवा चौथ १९ कार्तिक, ३ महिना २९ दिन
फाल्गुनन्द जयन्ती २५ कार्तिक, ४ महिना ५ दिन
काग तिहार २८ कार्तिक, ४ महिना ८ दिन
धन तेरस २८ कार्तिक, ४ महिना ८ दिन
कुकुर तिहार २९ कार्तिक, ४ महिना ९ दिन
लक्ष्मी पूजा २९ कार्तिक, ४ महिना ९ दिन
म्ह: पूजा ३० कार्तिक, ४ महिना १० दिन
भाई टिका १ मंसिर, ४ महिना ११ दिन
छट पूजा ५ मंसिर, ४ महिना १५ दिन
गुरु नानक जयन्ती १५ मंसिर, ४ महिना २५ दिन
बाला चतुर्दशी २८ मंसिर, ५ महिना ८ दिन
विवाह पञ्चमी ४ पौष, ५ महिना १४ दिन
उधौली पर्व १५ पौष, ५ महिना २५ दिन
योमरी पुन्हि १५ पौष, ५ महिना २५ दिन
तमु ल्होसार १५ पौष, ५ महिना २५ दिन
नयाँ वर्ष (एडी) १७ पौष, ५ महिना २७ दिन
तोल् ल्होसार १ माघ, ६ महिना १० दिन
तिलको लड्डु खाने दिन १ माघ, ६ महिना १० दिन
श्री स्वस्थानी पूर्णिमा १५ माघ, ६ महिना २४ दिन
सोनम् ल्होसार ३० माघ, ७ महिना ९ दिन
भ्यालेन्टाइन डे २ फागुन, ७ महिना ११ दिन
सरस्वती पूजा ४ फागुन, ७ महिना १३ दिन
प्रजातन्त्र दिवस ७ फागुन, ७ महिना १६ दिन
नारी दिवस २४ फागुन, ८ महिना ३ दिन
महा शिवरात्रि २७ फागुन, ८ महिना ६ दिन
ग्याल्बो ल्होसार १ चैत्र, ८ महिना ९ दिन
होली १५ चैत्र, ८ महिना २३ दिन
एप्रिल फूल डे १९ चैत्र, ८ महिना २७ दिन
घोडेजात्रा २९ चैत्र, ९ महिना ७ दिन
नयाँ वर्ष १ बैशाख, ९ महिना १० दिन
राम नवमी ८ बैशाख, ९ महिना १७ दिन
लोकतन्त्र दिवस ११ बैशाख, ९ महिना २० दिन
आमाको मुख हेर्ने दिन २८ बैशाख, १० महिना ७ दिन
अक्षय तृतीया १ जेष्ठ, १० महिना ११ दिन
बुद्ध पूर्णिमा १२ जेष्ठ, १० महिना २२ दिन
गणतन्त्र दिवस १५ जेष्ठ, १० महिना २५ दिन
दहिचिउरा खाने दिन १५ आषाढ, ११ महिना २६ दिन
गुरु पूर्णिमा ९ श्रावन, १२ महिना २१ दिन